Ogaden News Agency (ONA) – “Horumarka ka jira Ogadeniya waa Been” sidaas waxaa yiri Cabdi UBO Filiman daawo
“Horumarka ka jira Ogadeniya waa Been” sidaas waxaa yiri Cabdi UBO Filiman daawo
Ninka Masuulka uga ah dhulka Ogadeniya gumeysiga Ethiopia, Cabdi Ilay oo dadka qaarkiisna u yaqaanin Cabdi UBO ayaa waxaa dhowaanahan soo baxay siro badan oo fashilinaya hab dhaqankiisa iyo gumeysiga Ethiopia waxa uu usoo dhiibay si loogu fuliyo bulshada somalida Ogadeniya.
Hadaba Filimaan maqal iyo muuqaal ah oo so gaadhay ONA ayaa ku daawan doontaan dhowaan Siro cusub oo maqal iyo muuqaal ah oo laga helay Cabdi UBO oo la hadlaya shacabweyne isugu jira odeyaal iyo dad isku dhex jira goob shir ah, ayaa waxa uu ka qiranaya in ay been iyo turufo tahay horumarka ka jira dhulka Ogadeniya.
Cabdi UBO ayaa dadkaas ugu qudbadeynaya inaysan jirin wax horumar ah oo ka jirta dhulka Ogadeniya balse inay tahay been abuurasho tahay.
cabdi UBO ayaa filimkan cusub ku qiraya
Horumar ayaan gaadhnay, horumar ayaan gaadhnay, Report aan jirin oo been ah. Waxii horey la idiinku sheegayna waa been, kan aan hadda wadnona wax xaqaa iqa ah maahan ayuu leeyahay Cabdi UBO.
Su aashu waxa ay tahay hadaba waxmagaratada uu cabdi UBO u sheekeeyo ee kolba filimaanta u jilo horumarka ay ka sheekeeaan halkay ku arkeen. Hadiiba kii ay raali galinayeen uu sheegayo in wax horumar ah oo jira uusan jirin waxa ay wadaana uu been abuurasho yahay.
Su’alaahas iyo kuwo kaleba waxaad ka daawan doontaan dhowaan maqal iyo muqaal iyaga oo ah filimaan badan oo banaanka loo soo saaray.